musha 9 Products 9 Persona IQ
Kuchinja Kusimbisa Sosi muCognos chiitiko chine njodzi uye chinonetsa. Cognos inosangana neyepamusoro-soro bhizinesi chengetedzo zvirevo nekutsanangudza zvemukati maID mukati meako Euthentication sosi. Kana uchichinja kubva kune imwe sosi (LDAP, Active Directory, Series 7, OpenID Unganidzo kana imwe) kune imwe, iwo maID haatomboenderana zvichireva kuti unorasikirwa nezvose. Mashedule haazomhanya, zvemukati hazvigone kuwanikwa, ese aripo ekuchengetedza maitiro muCognos akavharwa. Kuitazve-kuita kupambadza kukuru kunonetesa kwenguva uye kunoitika kuchikanganiso chemanyorerwo. Motio'Persona IQ zvakachengeteka zvinopa zvikwata zveCognos kugona kunyatso ronga mepu vashandisi kubva kune imwe sosi yekusimbisa kuenda kune imwe pasina kuitisa patsva kana kurasikirwa.
Tsiva yako Namespace
Persona IQ inobvumidza iwe kuona akawanda ekuvimbika masosi (LDAP, Active Directory, Series 7, OpenID Unganidzo kana imwe) muCognos seimwe sosi.
Iyo chaiyo namespace inochengetedza maID ekuchengetedza mukati meCognos uye inobvumira maCognos zvikwata kuchinja masosi pasina kubata chero zvinhu kana zvemukati muCognos chero nguva. Hapana shanduko kana kukanganisa kune vashandisi, mapoka, basa, marongero, mashedhi, mamodheru kana PowerCubes. Izvi zvinopa chimbichimbi, zvakachengeteka uye zvakadzikira kukanganisa kune yako Cognos nharaunda kana uchichinja ekuchengetedza sosi nhasi kana mune ramangwana.
Persona IQ inobvumidza iwe kuti uverenge akawanda masisitimu echokwadi muCognos seimwe sosi.
Chinja yako Namespace
Paunenge uchichinja masosi echokwadi muCognos unoisa panjodzi yekurasa zvese. Zvese zvinhu zviri muCognos zvine mutemo wekuchengetedza uye iwo mutemo wakasungirirwa kumashure kune maID mukati meako sosi yekusimbisa. Izvi zvakanaka kune chengetedzo asi kurwadziwa kwakazara kana uchichinja kuvimbisa vatengesi kana matekinoroji. Kudzoreredza chengetedzo yako nemaoko inzira refu, inonetesa iyo inokanganisa zvikanganiso uye yakaoma kusimbisa. Persona IQ inoita kuti kufamba pakati peyechokwadi masosi kuchengeteka, nekukurumidza, uye nyore ne:
ZMepu yekare kune matsva ekuchengetedza maID (vashandisi, mapoka)
ZKugadziridza zvemukati, marongero, mabasa, uye zvirongwa
Unoda kuziva zvakawanda nezve inguva yakawanda sei, simba, uye kushushikana Persona IQ inogona kukusevha iwe nezvikwata zvako nevashandisi?
Persona IQ inotsigira kutamira kune uye kubva:
ZCognos Series 7 Yekushandisa Manager
ZMicrosoft Inoshanda Dhairekitori
ZMicrosoft Inoshanda Directory Federation Services
ZLDAP v3 Inoenderana Sources
Persona IQ Bhenefiti
Kunyangwe uchienda kune nyowani yekusimbisa sosi kana kutsiva yako namespace, Persona IQ inogona kupa zvinotevera mabhenefiti:
ZAsingasvike maminitsi mashanu eCognos yekuzorora
ZDzorerazve Cognos kune chitsva chekuchengetedza sosi pasi peawa
ZMakumi ezviuru zveCAMID mareferensi haambochinje
ZInopa masimba maBI zvikwata vachinamatira kuhutano hwechokwadi hwekambani
ZInobvisa anodhura, ane njodzi, uye anotora nguva kutama mapurojekiti